पढाई मात्र १० पास तर उनीहरु बरिष्ठ डाक्टर मात्र बनेन् अस्पताल नै खोलेर बर्षौ चलाउँदै ! – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /Video/पढाई मात्र १० पास तर उनीहरु बरिष्ठ डाक्टर मात्र बनेन् अस्पताल नै खोलेर बर्षौ चलाउँदै !
काठमाडौ । लामो समयदेखि नक्कली अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएका दुई जना समातिएका छन् । भारत, हैदराबादबाट उनीहरु पक्राउ परेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् । हैदराबादको मेहदीपट्टनम क्षेत्रमा दुई नक्कली डाक्टरहरूले अस्पताल चलाइरहेका थिए, प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
यी दुई व्यक्तिले पैसाको लागि जनताको ज्यान जोखिममा पारिरहेका थिए । अस्पतालका अध्यक्ष मोहम्मद शोएब सुभानी र अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक मोहम्मद अब्दुल मुजीब दुबैजनासँग डाक्टरी पढेको डिग्री छैन । यी दुई धेरै पुराना साथीहरू भएको पनि खुल्न आएको छ । उनीहरुले डीएम एन्ड एचओबाट समीर अस्पतालको नाममा दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए । यसका साथ डा।मोहम्मद अब्दुल मुजीबको नाममा आधार कार्डको एक प्रति बुझाइएको थियो ।
हैदराबाद प्रहरीले विशेष स्रोतबाट प्राप्त समाचारको आधारमा अनुसन्धान शुरू गरेको हो । सबै जना तब चकित भए जब तिनीहरू दुबैसँग डाक्टरी पढेको डिग्री छैन भन्ने कुरा खुल्यो । मोहम्मद शोएब सुभानी कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि सन् २००६ मा व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतको स्नातक तह (बीकम) अध्ययन बीचमा छोडेका थिए । सन् २०११ मा उनले मेहदीपट्नममा ‘ग्लोबल टेक्नो स्कूल’ खोलेको पनि खुल्न आएको छ । यस पछि सन् २०१७ मा, उनले नक्कली डाक्टर बनेर ‘समीर अस्पताल’ सञ्चालनमा ल्याएका थिए । अर्को तिर मोहम्मद अब्दुल मुजीबले १० कक्षा मात्र पढेका छन् । तर उनी मेहदीपट्नमको एमएम अस्पतालमा निर्देशक बनेका थिए । यस अवधिमा उनलाई थाहा भयो कि अस्पतालको व्यवसायमा धेरै फाइदा हुन्छ ।
मुजीबले आफ्नो साथीलाई अस्पतालको व्यापारमा हुने फाइदाहरूबारे बताए । यस पछि, सन् २०१७ मा उनले मोहम्मद शोएब सुभानीको सहयोगमा समीर अस्पताल शुरू गरेका हुन् । डा. मोहम्मद अब्दुल मुजीबको नाममा आधार कार्ड बनाए पछि उनले अस्पताललाई दर्ता गराएर प्रबन्ध निर्देशक भएर काम गर्दै आएक थिए । यी दुई व्यक्तिलाई धोका दिएर लामो समयसम्म अरुको जीवनसँग खेलिरहेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । उनले गैरकानुनी रूपमा धेरै पैसा कमाएको पनि प्रहरीको दावा छ । दुबैलाई हैदराबाद प्रहरीको पश्चिम क्षेत्र टास्क फोर्सले पक्राउ गरेको हो ।